Facebook ပေါ်မှာ မကြာခဏ စိတ်ရှုတ်စရာတွေ တွေ့နေရလား? | Online Service Center Myanmar -->
Facebook ပေါ်မှာ မကြာခဏ စိတ်ရှုတ်စရာတွေ တွေ့နေရလား?
တနေ့တနေ့ Facebook ပေါ်မှာ အနီနဲ့ အစိမ်းအတွက်ရန်တွေဖြစ်ကြ၊ Cele ရူးသူတွေရဲ့ ကျပ်မပြည့်တဲ့ပုံစံတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရ၊ ၁ ကျပ်ဖိုးလောက်သုံးပြီး ဘီလျံနာကြီးလိုလိုကြွားလုံးထုတ်တာတွေမြင်ရ၊ စော်မရှိ ဘဲမရှိလို့ လင်တရူး မယားတရူးပြီး အားနေဈေးဗန်းခင်းနေကြသူတွေကိုမြင်ရ၊ ဘုရားလည်းမသိ တရားလည်းမသိ ဆရာတော်လည်းမသိ အကုန်ပတ်ဆဲနေကြသူတွေကိုမြင်ရ၊ အရှက်အကြောက်မရှိတော့တဲ့ ဟိုဖော်ဒီဖော်နဲ့ အကုန်ပေါ်တာတွေကိုမြင်ရ၊ တာမျိုးတွေကစလို့ အာရုံတွေနောက်နေကြပြီ စိတ်တွေညစ်နေရပြီဆိုရင်တော့ ‌ဖြေရှင်းနည်းလေးရှိပါတယ်။
အဲ့ဒါလေးအတွက် ဖြေရှင်းရတာ အရမ်းလွယ်တယ်ဗျ၊ တခါဖြေရှင်းလိုက်ရုံနဲ့ နောက်ဘယ်တော့မှ အဲ့ဒါမျိုးထပ်ပြီး စိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ဘူး။
ဒီ fb.com/help/delete_account လေးကို နှိပ်လိုက်၊ ပြီးရင် Delete Account ဆိုတာလေးကိုသာရှာနှိပ်လိုက်ဗျာ။
နှိပ်ပြီးသွားရင် Facebook Password ရိုက်ထည့်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်၊ ပြီးတာနဲ့ Log Out အလိုလျောက်ထွက်သွားမယ်၊ ပြန်မ၀င်နဲ့နော် ရက် ၃၀ တိတိ ပြည့်အောင်စောင့်လိုက်၊ ရက် ၃၀ ပြည့်ပြီး ပြီဆိုတာနဲ့ 100% ပြေလည်သွားပြီဗျာ၊ နောက်နောင် အဲ့ဒါမျိုးလုံး၀မှ မဖြစ်တော့ဘူး။
အဓိက အချက်ကိုတော့သတိပြုပေးပါ// ရက် ၃၀ ကျော်သွားရင်တော့ ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပြောချင်ရင်နေပါ လုံး၀ လုံး၀မှ လာမဆဲဖို့တော့လိုပါတယ်။ အာ့လေးတစ်ခုက အရမ်းအရေးကြီးတယ်။
Aung Kyaw Soe ( 14.8.2020 - 9:26 AM )